သံမဏိကိုယ်ထည် - ATAD Steel Structure Corporation
သံမဏိကိုယ်ထည် – အနာဂတ်အတွက် ကိုယ်ထည်
သင့်အနေဖြင့် အဆောက်အဦးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေမည့် အဆောက်ဦးပုံစံရှာဖွေနေမည် ဆိုပါက တာရှည်ခံပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမက လိုသလိုပုံဖော် ဆောက်လုပ်နိုင်သေည သံမဏိကိုယ်ထည် အဆောက်အဦးများအား စဉ်းစားသင့်ပါသည်။
သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အဦးဆိုသည်မှာ သံသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဆောက်လုပ်မှု အစိတ်အပိုင်းများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကို အချိတ်ဆက်မိမိဖြင့် ဝန်အားခံနိုင်စွာ ဆောက်လုပ်နိုင်ပြီး မာကျောမှုအဆင့်မှီသော ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော သံမဏိကိုယ်ထည်များသည် အခြားသော ကွန်ကရစ်၊ သစ်သားတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကိုယ်ထည်များထက် ရေရှည်ခံနိုင်ပြီး ကုန်ကြမ်းအသုံးပြုမှုကိုလည်း ထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်သော ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်မှီ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အများစုသည် သံမဏိကိုယ်ထည်များအား အသုံးပြုလာကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အကြီးစားအဆောက်အဦးများ၊ အထပ်မြင့်များ၊ ဆောက်လုပ်မှု ထောက်ပံ့ပေးသောစနစ်၊ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာအဆောက်အဦးများ၊ တံတားများ၊ မျှော်စင်များ၊ လေဆိပ်အဆောက်အဦးများ၊ အကြီးစားစက်မှု ဓါတ်အားခွဲရုံများ၊ ပိုက်လိုင်းများနှင့် အခြားသော အဆောက်အဦးများအတွက်လည်း အသုံးဝင်သော ကိုယ်ထည်ဖြစ်သည်။
ထပ်မံကြည့်ရှု့ရန်: သံမဏိကိုယ်ထည် လုပ်ငန်းသုံးပရိုဂရမ်
ထပ်မံကြည့်ရှု့ရန်: ATAD ပရောဂျက်များ
သံမဏိကိုယ်ထည်များသည် အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံးအတွက် သံမဏိများဖြင့် အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သံမဏိကိုယ်ထည်များသည် ဆောက်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်၍ ဆောက်လုပ်မည့်အစိတ်အပိုင်းများကို လိုအပ်သည့် ပုံသဏ္ဍာန်၊ အရွယ်အစားအတိုင်း ထုတ်လုပ်၍ ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သံမဏိကိုယ်ထည်များအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်မှာ သံနှင့်ကာဗွန်ဖြစ်သည်။ သတ္တုဒြပ်စင်၊ သတ္တုစပ်နှင့် အခြားဓါတုပစ္စည်းများ ပေါင်းစက်ခြင်းသည် သံနှင့်ကာဗွန်တို့၏ ခံနိုင်စွမ်းအားနှင့် ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်မှုအဆင့်ကို တိုးတက်စေသည်။
အဆောက်အဦးတစ်ခုချင်းစီအတွက် လိုအပ်သလိုထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းအပြင် သံမဏိကိုယ်ထည်များကိုလည်း အပူ/အအေး (သို့မဟုတ်) အတွဲအဆက်လိုက် (သို့မဟုတ်) ပုံသဏ္ဍာန်စုံ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
သံမဏိကိုယ်ထည်များသည် မျိုးစုံသော ပုံသဏ္ဍာန်၊ အရွယ်အစား၊ အတိုင်းအတာများရှိသည်။ ပုံမှန်အသုံးပြုနေသော ကိုယ်ထည် များမှာ I-Beam, channels, angles များဖြစ်သည်။
I-Beam: I-shaped cross section.
Z-Shape: has halfaflange in opposite directions
HSS-Shape: Hollow structural section includes square, rectangular, circular (pipe) and elliptical cross sections
Angle: L-shaped cross section
Structural Channels: C-beam or C-shaped cross section
Tee: T-shaped cross section
Rail Profile: Strap rail, Flanged rail, Baulk rail, Barlow rail, Flat bottomed rail, Double-headed rail, Bullhead rail, Tangential turnouts, Grooved rail
Bar:apiece of metal, rectangular cross-sectioned and long, but not so wide so as to be calledasheet.
Rod:around or square and long piece of metal, see also rebar and dowel.
Plate: metal sheets thicker than4mm.
သံမဏိကိုယ်ထည် အဆောက်အဦးများ၏ အားသာချက်များ
ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်သက်သာခြင်း၊ အခြားသောအဆောက်အဦးဆောက်လုပ်မှုများထက် လိုအပ်ချက်နှင့် ပြင်ဆင်ရမှု နည်းပါခြင်း တို့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် သံမဏိကိုယ်ထည် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အား ပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ အခြားတည်ဆောက်မှုတစ်ခုတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အလိုအလျောက်သုံး ခေတ်မှီနည်းပညာများဖြင့် ထိန်းချုပ်မှုများပြုလုပ်နိုင်သဖြင့် လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ အလုပ်ပြီးမြောက်စေသည်။
သံမဏိကိုယ်ထည်များသည် စက်ရုံတွင်ထုတ်လုပ်ပြီး ဆောက်လုပ်မည့် လုပ်ငန်းခွင်နေရာတွင် တပ်ဆင်သောကြောင့် ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးနည်းပါးစေသည်။ ဘေးအန္တရာယ်အနည်းဆုံးသော နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် စက်ရုံအလုပ်ရုံများစစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထား သည်။
အချိူ့သော သံမဏိကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများသည် စက်ရုံတွင် တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် အနည်းငယ် ဆူညံခြင်းနှင့် ဖုန်မှုန့်များဖြစ်ပေါ်တက်သည်။
တပ်ဆင်မှုနည်းအသစ်၊ တပ်ဆင်မှု အခြေအနေ၊ အကျယ်အဝန်း စသည်တို့သည် လိုသလိုပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ စိတ်တိုင်းကျ ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အဦးများသည် ဆောက်လုပ်ပြီးနှစ်များကြာသည့်တိုင် လိုအပ်သည့်အတိုင်း ကြမ်းခင်းများကို ထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်သည်။
ဆက်သွယ်ရန် – ကျွနိုပ်တို့အေတီအေဒီ၏ တက်ကျွမ်းမှုသည် လူကြီးမင်းတို့လိုအပ်သော အဖြေတစ်ခုဖြစ်လာစေရမည်
ဆောက်လုပ်သူအလိုရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ ကျွနိုပ်တို့နှင့် မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းအဖြစ် လက်တွဲလို၍ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် သံမဏိကိုယ်ထည် အဆောက်အဦးများ အကြောင်းသိလိုပါက ကျွနိုပ်တို့ထံသို့ အချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ ဆောက်လုပ်မှု များအတွက် အလျင်မြန်ဆုံးနှင့် အလွယ်ကူဆုံးဖြေရှင်းပေးရန် အသင့်ရှိပါသည်။
လိပ်စာ : 99 Nguyen Thi Minh Khai St, Ben Thanh, Dist 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
အီးမေးလ် : sales@atad.vn
တယ်လီဖုန်း : (+84) 28 3926 0666
အီးမေးလ ATAD ပုံစံမှဖွညျ့ပါ